Bileyska Bossaso oo xiray dad gaaraya 100 qof oo lagu tuhmay falal ammaan darro. – Radio Daljir
Bosaso, Sept 23 – Ciidanka bileyska ee magaalada Boosaaso ayaa xir-xiray dad gaaraya 100 qof, kuwaasi oo lagu eedaynayo in ay ku lug-leeyihiin falal ammaan darro oo dhowrkii todobaad oo ugu danbeeyey ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso.
Dadka la xir-xiray ayaa isku jira rag iyo haween dhammaantood wada degganaa hal Kaam oo ay ku nool-yihiin dadka ka soo barakacay is maamulka Soomaalida Ethiopia, waxaana looga shaki-sanyahay ku lug-lahaansha falal dil ah oo is xig-xagay oo muddooyin isku dhow ka dhacay Boosaaso, waxaana kii ugu danbeeyey uu dhacay habeenkii xalay.
Dadka la-laayey iyo kuwa la xir-xiray ee lagu tuhun-san yahay in ay falalka dilka ah ka danbeeyeen, ayaa isku hal beel ka soo wada jeeda, waxayna ka wada tirsan-yihiin is maamulka Soomaalida Ethiopia.
Saraakiisha ciidanka bileyska magaalada Boosaaso oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay dhacdadaasi ayaa sheegay dadka la xir-xiray tiradoodu in ay gaarayso 100 qof, kuwaasi oo iskugu jira rag iyo dumarba, waxayna intaasi ku dareen xilligaan in lagu guda jiro baaritaano la xiriira falal dil ah oo ka dhacay Boosaaso, isla markaana ciddii wax lagu waayo si deg deg ah loo sii dayn-doono.
Bileysku waxay sheegeen xarigga dadkaani in uu ka danbeeyey kadib markii la helay warar muujinaya dilal dhowr ah oo ka dhacay Boosaaso, loona gaystay dad ka soo jeeda is maamulka Soomaalida Ethiopia, in ay salka ku hayeen aanooyin qabiil oo u dhaxaysa beelahaasi muddana ku oognayd deegaannada ay degaan haddana loo soo wareejiyey is ugaarsigooda meelaha beelahaasi ay ka deggan-yihiin Puntland.
Wararku waxay intaasi ku darayaan xirigga dadkaan in ay qayb ka ahaayeen odayaasha dhaqanka ee beeshaasi, kuwaasi oo ciidanka bileyska ku soo wargaliyey dawladdu in ay fara soo galiso arrimaha ka dhax-taagan beeshaasi si looga hortago dagaal dhiig ku daato.
Waa markii ugu horraysay oo tiro dad ah oo intaasi le?eg ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso ay xabsiga dhigaan, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in la siidaayo dadkaasi intii wax lagu waayo.